Kwayedza Across Devices Nyore neAdobe Shadow | Martech Zone
Kwayedza Across Devices Nyore neAdobe Shadow
Mugovera, Kubvumbi 28, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Kana iwe wakamboedza saiti pane ese mafoni uye mapiritsi mabhurawuza, zvinogona kuve zvinorwadza uye zvinopedza nguva. Mamwe makambani auya nematurusi ekutevedzera kupa pane zvishandiso, asi hazvina kumbobvira zvakaenzana nekuyedza pachigadzirwa zvacho. Ndanga ndichiverenga Webhu Dhizaini Magazini nhasi ndikaona kuti Adobe yakatangwa mumvuri, chishandiso chekubatsira vagadziri vaviri kumusoro uye kushanda nemidziyo munguva chaiyo.
Pakutanga kuona, ini handina kufadzwa neiyo sync mashini ... ndiani ane hanya kana ndikakwanisa kubaya pane saiti uye nekuita ese maviri maviri maviri maviri paired michina shanduko kune iro peji Icho chakanyanya kunaka chimiro; zvisinei, ndiko kugona kunyatso tarisa nekushandisa sosi yechigadzirwa chimwe nechimwe kubva pakombuta yako. Izvi zvinogonesa chero mugadziri kunetsekana nekukanganisa magadzirirwo avo.
Kune vagadziri vari kusanganisira vanoteerera dhizaini, izvi zvinonyanya kubatsira! Kugadzirisa dhizaini kunoenderana nesaizi yechishandiso chako pane kungonongedzera bhurawuza kune imwe tema kana dhizaini. Ivo vari kuve vanozivikanwa kwazvo muindasitiri. Kuti uwane rumwe ruzivo, unogona kuverenga chinyorwa pa Kupwanya Magazini paKuteerera Webhu Dhizaini.
Download Adobe Shadow yeMac kana Windows. Izvo zvinodawo iyo Google Chrome extension uye inosanganisirwa app kune yega yega zvishandiso zvako.
Tags: mumvuri weadobebrowser rekuyedzaipad browseripad kuyedzanharembozhamobile browser browser kuyedzwawirirana patanisafaripiritsi kuyedzwa
Mhedzisiro yeOnline Ongororo
Kumuka kweVanoona Masocial Networks